Inqaku leRedmi 7 lithengise ngaphezulu kweeyunithi ezizigidi ezi-4 | I-Androidsis
NgoJanuwari iRedmi Qaphela 7 yaziswa ngokusemthethweni. SYifowuni yokuqala yohlobo lwaseTshayina njengophawu oluzimeleyo. I-smartphone eye yoyisa ibanga eliphakathi kwi-Android. Kwasekuqaleni iqhube kakuhle kwimarike, ngokukhawuleza ifikelela izigidi zeeyunithi zithengisiwe.
Le modeli iyanda kwimarike yamanye amazwe. Kuba ibiziiveki ezimbalwa nayo ifumaneka ngokusemthethweni eSpain, apho yonke into inokuba yimpumelelo kwi-Chinese brand. Ngoku, UXiaomi utyhila amanani amatsha entengiso ale Redmi Qaphela 7, ezenza kucace ukuba yimpumelelo kwintengiso.
Isixhobo besithengisiwe kwisithuba nje esingaphantsi kweenyanga ezintathu. Ukuba amanani enyanga yokuqala sele ecacisile ukuba kukho umdla, amanani amatsha athe uXiaomi wabelana ngawo kwakhona angqina koku. Inqaku leRedmi 7 linalo Sele ithengise ngaphezulu kweeyunithi ezizigidi ezi-4 kwintengiso. Kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezintathu.
IBHAYIBHILE! Usuku olutsha, inyathelo elitsha elibalulekileyo lethu #RedmiNote7 uthotho.
Nanga amagama asixhenxe ukukubulela ngayo yonke inkxaso yakho…
ENKOSI# HayiMiNgaphandle kwakho # 48MPBomntu wonke pic.twitter.com/pmimoFhjKE
-Xiaomi # 48MPforEveryone (@xiaomi) Aprili 2, 2019
Ngaphandle kwamathandabuzo, la ngamanani afumanekayo kwiimpawu ezimbalwa namhlanje. Kodwa bayayicacisa Umdla omkhulu owenziwe sesi sixhobo kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Inikwe ukhetho olunomdla kakhulu ngokwexabiso lemali. Siyamangaliswa kukuba ithengise kakuhle.
Olu luhlu lweefowuni belusoloko luyenye yezona zidumileyo kwiXiaomi. Inqaku leRedmi 7 liye laba lelokuqala kuluhlu oluza kuqaliswa phantsi kwegama elitsha. Ukongeza ekubeni inye kuphela kweli candelo eza kuqaliswa kwintengiso yamanye amazwe, njengoko inkampani ngokwayo iqinisekisile.
Ukuba iRedmi Qaphela i-7 ifikelele kweli nani ngexesha elifutshane, ithembisa ukuba ngokuqinisekileyo yenye ye Iifowuni ezithengisa kakhulu kwi-Android kulo nyaka. Kuba ikwazisa kwiimarike ezintsha, ngokungathandabuzekiyo ezinceda ukuthengisa okungcono. Umzekelo, kwimeko yaseSpain kuthatha iiveki nje ezimbalwa. Ke ukuthengisa kwakho kuya kunyuka ngokuqinisekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UXiaomi sele ethengisile ngaphezulu kwesigidi se-4 iRedmi Qaphela i7
Ixabiso le-LG V50 ThinQ 5G kunye nokwaziswa okuqinisekisiweyo eKorea